एल्यूमीनियम मत्स्य पालन नाउ पुनर्स्थापना | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
आफूलाई एउटा अवकाश उपहार स्वरूप, हजुरबुवा नयाँ, फ्लैट तल, एल्यूमीनियम माछा मार्ने डुङ्गा किनेको। एल्यूमीनियम फिर्ता त्यसपछि डुङ्गा प्रयोग एक अपेक्षाकृत नयाँ सामाग्री थियो। यो डुङ्गा 1966 मा "नवीनतम र सबैभन्दा ठूलो" छलफल भएको थियो। यो बिन्दु सम्म, उहाँले प्लाईवुड बाहिर आफ्नो माछा मार्ने डुङ्गा गरे। डुङ्गा मान्छे tangled रही रेखाहरू रोक्न पर्याप्त अलग माछा सकून् 16 लम्बाइमा खुट्टा, धेरै लामो दिन को सबै भन्दा डुङ्गा भन्दा फ्लाई माछा मार्ने लागि आवश्यक थियो, तर। म मेरो हजुरबुबा पनि मनमा थियो आफ्नो परिवार बढ्दै गएपछि बच्चाहरु र grandkids संग माछा पकडने लाग्छ। यो पनि धेरै उहाँले सुरु र आफैले यो सबै लोड सक्ने, आफ्नो पुरानो काठ डुङ्गा भन्दा हल्का पर्याप्त प्रकाश थियो। गरे अप Irvin ट्रैविस यो डुङ्गा, आफ्नो 1963 Evinrude 3hp मोटर र Silvertrol trolling मोटर संग, म माछा गर्न सिकें र साथ भयो कि माछा मार्ने डुङ्गा उड।
मेरो दादा एक मछुआ मछुआरे थियो र माछा माछा माछा माछा माछा को एक मात्र प्रकार हामीले गरेका थियो। मैले धेरै समयको मजा लिनुभयो जुन मैले आफ्नो दादा, पिता र अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई माछा मार्ने बित्तिकै। उहाँले हामीलाई धेरै जीवनका पाठहरू सिकाउनुभयो, र म त्यस्ता दादाभरीको लागि धेरै भाग्यशाली हुन चाहन्छु। उहाँले 1981 मा पार भएपछि, न त मेरो बुबा र म भावनात्मक रूपमा आफैले दस वर्षको लागि माछा माछा मार्न ल्याउन सक्दिन। दाजुभाइको डुङ्गाले अर्को 30 + वर्षको लागि मेरो घरमा बहालीको छेउमा झिक्यो। पिताजी र म मत्स्य पालनमा फर्किएँ, तर नयाँ, अझ अधिक सहज, पनीर डुङ्गाको साथ। यो समयमा यो समय थियो कि हामी इंडियनपोलिस फ्लाई कास्टर्स संग संलग्न भएको छ जसले हामीलाई माछा माछा मार्न लाई मद्दत पुर्यायो। हामी खुसीसाथ मेरो परिवारको रूपमा म्यानपाइको पोखरीमा मछाल माछाको परम्परा र पर्खाल गड्ढेको बिरोध जारी राख्यो। अन्ततः, हामीले दुई गेहेनोई माछा पकडने डुङ्गाहरू प्राप्त गर्यौं जुन पाँच जनालाई माछा मार्ने कोसिस गर्दछ।
यो वसन्त, म मेरो पिता, चाचा र उनको छोरा, मेरो छोरा, भान्जा एक ठूलो माछा मार्ने यात्रा योजना, र चाँडै ज्वाइ म परिवारमा स्वीकार अघि फ्लाई मछुवा मा बनाउन चाहने हुन। त्यो हामी संभावित सात गरे, र म हामी अर्को डुङ्गा आवश्यक भन्ने महसुस गर्न आए। म मेरो SHED छेउमा गए र टाढा पाइन सुई को4इन्च ब्रश र हजुरबुवा गरेको पुरानो माछा मार्ने डुङ्गा बाहिर तान्नुभयो। डुङ्गा भयानक आकारमा 30 + वर्ष बसेर पछि थियो। काठ सबै बिग्रेको थियो। सबै rusted थिए सँगै काठ आयोजित कि बोल्ट, डुङ्गा नराम्ररी को पाइन सुई देखि दाग र जमीनमा रहेको थियो। म मेरो हजुरबुबा गरेको डुङ्गा यस्तो स्थिति deteriorate कसरी गरौं सक्थे? यसलाई म पुनर्स्थापना गर्न निर्णय गरे कि त थियो।
मेरो बुबा र चाचा Curt आफ्नो 80 गरेको दुवै छन्। म, हामी सँगै त सबै यो डुङ्गा पुनस्थापित हुनेछ कसरी धेरै माछा मार्ने यात्राको थाहा छैन हामी सबै माछा मार्ने उड सम्झना मलाई सबै महत्त्वपूर्ण भयो। मेरो क्षमता को सबै भन्दा राम्रो गर्न पुनर्स्थापना गर्न निर्णय र हाम्रो यात्रा मा उनीहरूलाई चकित।
यो आकार मा यो डुङ्गा ह्विप गर्न वर्षा वर्षा बीच काम, दुई हप्ता बारेमा मलाई लाग्यो। डुङ्गा म बालुवा विस्फोट निर्णय र यो रंग त्यस्तो खराब आकारमा थियो। म अघि बालुवा ब्लास्टर कहिल्यै पनि काम तर मेरो हावा खुम्च्याउने साथ प्रयोग गर्न एउटा उधारो गर्न सक्षम थियो। सबै काठ र rusted इस्पात बोल्ट को डुङ्गा stripping पछि, म बालुवा यसलाई खुला एल्यूमीनियम तल ब्लग। म मेरो हजुरबुबा जस्तै हात सुरुवात लागि पक्षले आगे र तार माछा बास्केट मा क्लिप गर्न पिछाडी हुक, र विशेष ह्यान्डलहरू रूपमा थियो कि केही अनुकूलन छोड्न गरे, त्यसैले हामी यो अझै पनि आफ्नो डुङ्गा थियो थाहा थियो।
मैले एक कार्यक्षेत्रको रूपमा उपयोगिता ट्रेलर प्रयोग गरें र पानीको भित्ता भत्किएको छ, जुन धेरै थिए। मैले धेरै रक्सी र ढोका राइभेटहरूसँग सताएझैँ अँध्यारो र अनुहारको बोटलाई बदलिदिएँ जुन उसले विस्तारै राइभेटहरू बदल्न प्रयोग गर्यो। लीक प्याच गरे पछि, मैले एक प्वाइन्ट स्प्रेयर प्रयोग गरे र डुङ्गाको आन्तरिक र बाहिरी पक्षलाई चित्रण गरें, तलल्लो अपरिवर्तित छोडिदिनु भयो किनकी यसले पट्टा पानीको पछाडिको बायाँको पछिल्लो मूल दाग थियो। म सामान्य हार्डवेयर र प्यानल भण्डारहरूमा "माछा मार्ने कोट प्यान" फेला पार्न कठिन समय थियो। म स्थानीय जॉन डेरे जाँदैछु र जॉन देरे हरी ट्राक्टर प्यान्टको ग्यालेन किन्नुहुन्छ, जुन मैले सोचेको थिएँ कि माछाको डुङ्गाको लागि राम्रो हुनेछ, र म सही थियो! मैले डुङ्गाको अगाडिमा सीट प्लेटफर्म र ट्रेलिंग मोटर माउन्ट पुनर्निर्माण गरेँ, यसैले सानो काठको रूपमा प्रयोग गरेर मैले सकेसम्म धेरै वजन थप्न सकेन। मैले ट्रान्समममा काठलाई पनि बदले।
मैले केहि सुधार गर्न निर्णय गरे। मेरो पैसाले मेरो समयमा मात्र उपलब्ध भएको पैसा, उपकरण, र सहायकहरू थिए। मैले तीन नयाँ आरामदायक सीटहरू थपेँ जुन साधारण लक्जरी कुशनको तुलनामा हामी पहिले थियो। मैले आफ्नै सीट माई लगाए। यदि तपाईं तस्वीरहरूमा नजीक देख्नुहुन्छ भने, तपाईं डुङ्गा सन्तुलन राख्नको लागि कि सीटहरूलाई तिरस्कारबाट समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो आफ्नै आविष्कार थियो। सीटहरू छिटो रिलीज घुमाउने घुमाउरो घुमाउरो थिए।
मेरो हजुरबुबा मूल उहाँले बीचमा सीट पछि डुङ्गा को बीचमा राखे जो Trolling मोटर लागि दुई6भोल्ट ब्याट्री थियो। म एउटा मात्र 12 भोल्ट ब्याट्री बाहेक नै गरे। म अगाडि सीट अन्तर्गत एउटा "जम्पर केबल" डुङ्गा को बीचमा देखि भाग्यो र जडान गर्न trolling मोटर शक्ति केबल लागि ठाउँ बनाउन बोल्ट र वाशर प्रयोग। म एक फ्लोट सक्रिय bilge पम्प, डुङ्गा फेरि लीक सुरु यदि सजिला मा आउनेछ भनेर कुरा थपियो। हामी पुरानो डुङ्गा मा एक bilge पंप कहिल्यै भएको थियो।
म अझै पनि मूल Evinrude 3hp Lightwin म केही वर्ष पहिले पुनःस्थापित जो म साफ र डुङ्गा मा फिर्ता राख्नु भनेर मोटर, र आफ्नो Silvertrol Trolling मोटर थियो। मलाई लाग्यो, जो उपयुक्त आदर थियो, - म त म माथि गरे केही बम्पर स्टिकर "Spurgeon इन्डियाना उड मछुवा Irvin ट्रैविस, ठूलो 'Stripper पिट'" भने थियो डुङ्गा मा मेरो हजुरबुबा नाम राख्न चाहन्थे निर्णय।
एक घण्टा पछि वा डुङ्गा प्रशंसा यति, एक व्यक्ति सुझाव एक संग्रहालय टुक्रा रूपमा डुङ्गा छोडेर, तर म यसलाई मेरो छोरा, टमी सुरु र गरौं निर्णय र छोरा-मा-कानून, एलेक्स यो साँझ माछा मार्ने लागि बाहिर ले। म आशा रूपमा, डुङ्गा पूर्ण काम गरे। मेरो बुबा उहाँले आफ्नो कान्छो वर्ष मा भएको थियो र नयाँ डुङ्गा को सुरक्षा मनपरेको शेष अभाव किनभने डुङ्गा बाहिर जान अस्वीकार गरियो। Curt र म डुंगा लगे र हामी फ्लाई माछा मार्ने को लामो भूल कला पुन: सिक्न डुङ्गा टिप छैन गर्दा थियो भनेर बुझे। Curt र म हामी आफ्नो कान्छो वर्ष मा थिए र सावधान हुनुपर्ने थियो भन्दा धेरै भारी हो। अन्ततः हामी मा समातिए र अझै पनि धेरै जोखिम साबित डुङ्गा मेरो चरा कुकुर अनुमति हुनत, फेरि त्यो डुङ्गा बाहिर मजा माछा मार्ने थियो।